Debian 10.7 ikozvino yave kuwanikwa, inouya kazhinji nechengetedzo zvigamba | Linux Vakapindwa muropa
Rave rinenge gore nehafu izvo «Buster» anesu. Kubva ipapo, chirongwa cheDebian chakaburitsa zvinomwe zvekugadziriswa yechitanhatu pakupera kwaGunyana uye maawa mashoma apfuura ivo vakatanga Debian 10.7. Haisi iyo inonakidza kuvandudzwa kweichi chakakurumbira kugovera, amai naambuya eakawanda mashandiro masystem, asi aya marudzi ezvigadziriso haana kumbobvira, kana akafanana akafanana mune vamwe vevana vawo vakaita saUbuntu.
Seizvo chirongwa chinoratidza mune kusunungura chinyorwaVashandisi vari kutoshandisa Debian 10 havafanirwe kunetseka zvakanyanya kuti vagamuchire dzese nhau dzeichi chigadziriso, kupfuura chero chinhu nekuti ndivo vakaburitswa mumwedzi yapfuura uye, kana vasina kutozviisa, vanozoonekwa munguva pfupi sezvazvinowanikwa.
Debian 10.7 haisi vhezheni itsva yeDebian
Ziva kuti kuburitswa kweruvara hakuiti vhezheni itsva yeDebian 10, asi inongogadziridza mamwe emapakeji akaisirwa. Iko hakuna kudikanwa kwekuchera yekare "Buster" midhiya. Mushure mekumisikidza, mapakeji anokwanisa kuvandudzwa kushanduro dzazvino vachishandisa yakagadziridzwa Debian girazi. Ivo vanoisa zvigadziriso kubva kunechengetedzo.debian.org kazhinji havazofanirwe kugadzirisa akawanda mapakeji, uye mazhinji ezvigadziriso izvi zvinosanganisirwa mukuburitswa kwenzvimbo.
Chimwe chinhu chavanotaurawo ndechekuti avo vanoisa izvo zvitsva kubva security.debian.org ivo vachatove nezvishoma kugadzirisa, nekuti vanenge vatove nekuisa ese ekuvandudzwa kweCVE ekuchengetedza, inova ndiyo yakawanda yemifananidzo mitsva. Uye kutaura nezve mifananidzo mitsva, aya e10.7 anowanikwa mu Iyi link, uye isu tinofanirwa kuyeuka kuti ndezvekungowisirwa nyowani kana yeavo vasingade kurodha kubva kuDebian 9 kana kumutsiridzwa kwamberi kubva kune imwecheteyo sisitimu yekushandisa.
Ukuwo, Debian 11 inotarisirwa kusvika imwe nguva muna 2021.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Debian 10.7 ikozvino yave kuwanikwa, inouya kazhinji iine kuchengetedzeka zvigamba